Blog of Nyein Chan Yar: 2008.01
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် အချစ်အကြောင်း ပြောတော့မယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော့် ခံစားချက်တွေကို ရေးလေ့ရှိပေမယ့် အချစ်အကြောင်း မရေးဖူးဘူး။ (တစ်ခါပဲ အရင်က ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာအဟောင်းလေး တင်ဖူးတယ်။) ဘာလို့ မရေးတာလဲ ဆိုတော့ အချစ် (falling in love) ဆိုတာ နာကျင် ခံစားရတာတွေ၊ လွမ်းဆွတ် ကြေကွဲရတာတွေ နဲ့ပြည့်နေတာလို့ ခံယူထားလို့ပါ။ ဒါ လူတိုင်း ဒီလိုပဲ ကြုံရလိမ့်မယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ "I'm in love" ဆိုပြီး ပီတိတွေဖြာနေကြတာ တွေ့နေရတာပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ 6နှစ်လောက်ကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောင်ကို အရမ်းအရမ်း ချစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်ပြန်ရတာကျတော့ ငြင်းပယ်ခြင်းပဲ။ အဲဒီတုန်ကဆို စားလည်းဒီစိတ်၊ သွားလည်းဒီစိတ်၊ စာသင်ချိန်လည်းဒီစိတ်၊ နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တောင် သူ့ကြောင့် ပဲ ခံစား နေရတာပါပဲ။ သူ့ကြောင့် အကြိမ်ကြိမ်လည်း ငိုခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီး သုံးနှစ်လောက် ခံစား၊ ဘဝတွေလည်းပျက်၊ နဲ့ ဆိုတော့ "ချစ်ခြင်း" ဆိုတာကို လုံးဝ မခံစားရဲတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားမိရင် ကိုယ်ပဲ စိတ်ညစ် ခံစားရလိမ့်မယ် လို့မြင်မိတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကို စိတ်ထဲက မေတ္တာထား ဂရုစိုက်တယ်။ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်တယ်။ ကိုယ်လျှောက်ရမယ့် လမ်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်လေ။
ထားပါတော့။ အချစ်အကြောင်း ရေးမယ်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တော့ လုံးဝ romantic မဖြစ်ဘူး။ တစ်ကယ်ပြောတာပါ။ ဒီချစ်တဲ့ စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ဆိုတာ အစိတ်အတောက်က ပိုများပါတယ်။ ၁၅၀၀ ဘာညာဆိုပြီး ပြောနေကြတဲ့ ဟာကိုပြောတာနော်။ အဲဒီအချစ်ကြောင့်ပဲ စစ်တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ လူတွေ သေခဲ့ကြတယ်။ ပြောရရင် အများကြီးပဲ။
တစ်ကယ် အရေးကြီးတာ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တာက မေတ္တာ ထားတတ်ဖို့ပါ။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာနဲ့ ထာဝရ ရင်းရင်းနှီးနှီး ချစ်ခင်သွားလို့ရတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးလိုအပ်နေတာဟာ မေတ္တာတရားပါ။ အဲ့ဒါပါပဲ။ ဆက်ရေးလေလေ romantic မဖြစ်ပဲ တရားဟောသလိုပါ ဖြစ်သွားတယ်။ ဆက်မရေးတော့ပါဘူး။ တော်ပြီ။ :)
Posted by Daythanix Chann at Thursday, January 31, 20085comments:
A colleague of mine asked me for she cannot access “folder option” on her laptop. Yes, of coz, some kind of virus disabled that option. There, I installed my favorite antivirus, Avast, and killed many viruses after boot scan. You know, even though no virus left on that system, you need to repair those control options which virus had disabled. I searched for some easy solution on web and found this little program called RRT.exe. Wow, it’s awesome!!! It checks the system for everything needed to be fixed. And you can select the options to fix instantly. I gave it to some other friends who need it, they were so happy after using it. Folder options, Registery regedit, task manager, hidden files/ filder, run, IE homepage, System files, show desktop, file extension and many many more can be fixed. You can dl it from www.sergiwa.com.
Posted by Daythanix Chann at Saturday, January 26, 20082comments:
လူသားဘ၀တွေ မတည်မြဲဘူးတဲ့။ ဒီစကားစုကို ငါအထပ်ထပ် ရေရွတ်နေခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလည်း ကြားနေရတယ်၊ ဒီ ခန္ဓာကိုယ် ထဲက သေချင်စိတ်။ ဒါမှမဟုတ် ရှင်သန်ချင်စိတ်။ ဒီနှစ်ခုရဲ့ နယ်စပ်မှာ ဘဝကြီးကပဲ ရောဂါတွေကို ကျွေးမွေးနေမိသလား။ အဖျား ရောဂါရဲ့အဆင့်ခုနှစ်မှာ ကြောက်ရွံ့မှုရဲ့အရသာနဲ့ ငါခါးသက်လှပြီ၊ မိခင် ကမ္ဘာမြေရေ... သင်လည်ပတ်နေသရွေ့ ဒီနာကျင်မှုတွေ အဓွန့်ရှည်နေဦးမှာလား။
ကြမ်းကြုတ်မှု နာကျင်မှုတွေ ငါ့ခန္ဒာကိုယ်က အားအင်တွေကို စုတ်ယူနေသလား။ ငါအမြဲသိပါတယ်၊ ကမ္ဘာမြေရေ ဟောဒီ မြေပြင်ပေါ်မှာ အမှန်တရားပဲ အမြဲထိခိုက်ခံစားရတာ များပြီနော်။ ဒီအသံတွေ... ကြားနေရဆဲပဲ၊ နားထဲမှာ နားထဲမှာ နောက်ပြီး ရယ်သံတွေ၊ ရယ်သံတွေ ရဲ့အလယ်မှာ အထီးကျန်ခြင်းကို ခံစားသိခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သည်းခံမှုကို သိခဲ့ရတယ်။
ပိုးမွှားတွေ ပိုးမွှားတွေ ငါ့ ခေါင်းထဲကို ရောက်လာကြပြီလား ထွက်သွားကြစမ်းပါ။ အသံတွေကျယ်လောင်လာနေပြီ။ ။ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ အမိုးအောက်မှာ ရှိနေသရွေ့ငါ့ကိုလေးစားရမယ် လို့... ငါအာခေါင်ခြစ်ပြီး အော်လိုက်မိတယ်။ (ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ရှင်သန်ဆဲလား။) ထွက်သွားကြစမ်းပါ။ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့အမိုးအောက်မှာ ရှိနေသရွေ့ငါ့ကိုလေးစားရမယ်။ ဒီည၊ နောက်တစ်ရက်၊ အမှောင်၊ ပြီးတော့ မှောင်မိုက်တဲ့ အိပ်စက်ခြင်းထဲမှာ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆွဲယူကြိတ်ခြေနေသလို၊ သွေးလွန်နေတဲ့ သန္ဓေသားလောင်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်မက်ဆိုးရဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို ငါလွင့်မျောနေရင်း သေလွန်သော လူတွေရေ... ငါတို့တစ်လမ်းထဲလျှောက် နေကြရပြီလား။ ရေ...ရေဆာလိုက်တာ၊ ဟောဒီအခါးတွေ၊ ပြီးဆုံးပါတော့၊ မနက်မိုးလင်းတိုင်း အိပ်မက်တွေနဲ့ ငတ်မွတ် နေမိသလား၊ အလကားကွာ၊ သွားသေစမ်းပါ။ မင်းရဲ့စိတ်ကိုချဲ့ထွင်လိုက်စမ်းပါ။ ပြီးတော့ ဘာမှ မခုခံမတိုက်ခိုက်ပဲ အရှုံးပေးလိုက်ရမှာလား။ မင်းတို့တွေဟာ လွတ်လပ်စွာ ပွင့်တဲ့ပန်းကို ပိတ်လှောင် ရိုက်ချိုး သတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ၊ ဒေါသတရားက ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မော်လီကျူးတွေမှာ ပေါက်ပွားနေပြီ၊။ မေမေရေ... ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရောဂါပိုးမွှားတွေရဲ့ အသံကို ကြားနေရလား။ အဖျားရှိန်ရဲ့ အနံ့တွေ ရနေလား။ ၊ အားနည်းနေတဲ့သွေးကြောတွေထဲ ဒီအဖျားရောဂါတွေလေ။ တစစ ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီး၊ ငါ့ရင်ခေါင်းထဲမှာ လစ်ဟာနေပြီ်၊ ငါ့ကိုယ်ငါ အရာရာတိုင်းမှာ လိုက်ရှာနေမိတယ်။ ဝါးမြိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ သေခြင်တရားရေ ငါ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ငါကိုမှတ်ထားတယ်။ ဒီသွေးထဲကနေ စုတ်ထုတ်ပစ်ရမယ်။ ohh... ratatouille strychnine ၊ ဟိုးအဝေးက လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေ။ အိမ်သေးသေးလေးတွေ။ ငါရောက်သွားခဲ့သေးတယ်။ အချစ်လေးရေ... ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ ဂီတကိုလည်း ငါကြားခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မြင့်မြတ်သူတွေသာ အောင်နိုင်ရမယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော် လူသားအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ပြောဆိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့ ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်ချက်မမဲ့ရဘူး။ ကျွန်တော် ဘာတွေစတေးခဲ့ရလဲ နာကျင်ခံစားခဲ့ရလဲ သိလား။
ငါ့ကိုကြောက်စမ်းပါ သေခြင်းတရား။ ငါ့ကိုကြောက်စမ်းပါ ။
ငါတို့ရဲ့ အတောင်ပံတွေ ခြောက်သွေ့ပြီး လွတ်မြောက်လုနီးပြီ
အမှန်တရားဟာ ငါတို့ဘက်ရောက်လာရမယ့် အချိန်ပဲ
မြင့်မြတ်တဲ့ငါတို့ ပြာပုံဘဝက ပြန်ထရမယ့် အချိန်ပဲ
ဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့စစ်ပွဲပဲ
ငါတို့ ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်ချက်မမဲ့ရဘူး။
မိခင်ကမ္ဘာမြေ လည်ပတ်နေသမျှ အမှန်တရားအတွက်။ ။
Posted by Daythanix Chann at Thursday, January 17, 20084comments:
These days, I’m thinking to solve my difficulties in accessing my blog and blogger.com. I thought what I should do. I heard it is possible to import all archive from my blogger powered blog to Wordpress powered blog with the use of plug-in. I dunno if it really works. I think I should ask my friend, Wordpress sayama, Mayvelous. If the situations are favorable, I will register foradomain name and web hosting.
Since the end of September uprising, I was unable to access Blogger and I have to email my posts to Blogger.com. This only solved for posting only. I cannot manage my posts. For example, in my previous post I sent email forgetting to enter post title. I saw it, stopped the browser and enter the title and pressed the send button again. The result is as you can see. I cannot edit / delete posts. And I cannot edit blog layout design.
And since then, I couldn’t write on any other topics I used to write except Burma political situations. I was busy preparing foracertificate exam. That’s why, I paused writing other topics. I keep on writing Burma topic because I take it asaresponsibility ofagood citizen of Burma.
But, I will start writing all topics from now on. And I will write in Burmese time by time as usual. I will include language name in post title for all titles will be in English.
By the way, among many websites banned by Burmese ISPs, paypal is one of these websites. But it is strange that it doesn’t say “access denied” message as usual but it returnamessage “Server Failure: The name server was unable to process this query.” It puzzled me. If they banned access to PayPal, why don’t they show this error for all banned sites. If this is really an error, why PayPal? And accessing to its owner site eBay returns the same error.
By the way, Wikia search is online now. http://alpha.search.wikia.com/
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, January 08, 20084comments:
Posted by Daythanix Chann at Thursday, January 03, 2008 1 comment:
Independence Day of Burma? In Burmese, this day is actually called Freedom day (Luut Let Yay လွတ်လပ်ရေး). How shall people of Burma celebrate 60th anniversary of Freedom Day when there is no freedom at all. In history, she regained her independence in 1948 but she lost her freedom in 1962. Ne Win seized the power first and his successors followed the path he led. Will the people of Burma success in this nonviolence movement against dictator? Or, will there be armed revolution? Who knows? But, in the end, the dictator would fall. The future is ours. This is the bloody truth Than Shwe and his followers must accept.
Posted by Daythanix Chann at Thursday, January 03, 20082comments:
Independence Day of Burma? In Burmese, this day i...